अनलाइन मिटिङ वा कन्फरेन्स गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान दिनुस् मोबाइलको ब्यालेन्स स्वाट्टै काटिएला ! - Technology Khabar
» ताजा समाचार » अनलाइन मिटिङ वा कन्फरेन्स गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान दिनुस् मोबाइलको ब्यालेन्स स्वाट्टै काटिएला !
अनलाइन मिटिङ वा कन्फरेन्स गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान दिनुस् मोबाइलको ब्यालेन्स स्वाट्टै काटिएला !
Technology Khabar २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी प्रभावले गर्दा अहिले मानिसहरुले धेरै कुरा इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइनमार्फत नै गर्ने प्रचलन बढेको छ। त्यसै मध्येको एक हो विभिन्न एप्सका माध्यमबाट गरिने अनलाइन मिटिङ र कन्फरेन्सिङ।
हिजोआज लकडाउनको बेलामा आफ्नो कार्यालयको कार्यका लागि अनलाइन मिटिङ, देश विदेशमा रहेका आफ्ना साथीभाई, परिवारका सदस्य, आफन्तसँग समुहमा भिडियो कल गर्न होस् वा विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षा, अनलाइन मिटिङ र भिडियो कन्फरेन्सको प्रयोग व्यापक रुपमा बढेको छ।
अनलाइन मिटिङका लागि थुप्रै एप्स तथा प्लेटफर्महरु इन्टरनेटमा उपलब्ध रहेका छन्। प्रायजसो प्लेटफर्महरुबाट इन्टरनेटको प्रयोग गरी इन्टरनेट बाहेक अन्य शुल्क बिना मिटिङ वा कम्फ्रेन्सहरु गर्न सकिन्छ।
यसमध्ये पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका जूम, गूगल मिट, फेसबुकको मेसेन्जर रुम्स, माइक्रोसफ्टको टिम्सलगायत प्लेटफर्महरु हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं ।
यी एप तथा प्लेटफर्महरुको आधारभूत सेवा निशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ तर यसमा अतिरिक्त थप सेवा लिन रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि कुनै/कुनै प्रिमियम एप्स वा सफ्टवेयरबाट अनलाइन मिटिङ गर्दा अतिरिक्त शुल्क पनि लाग्ने हुनसक्छ।
आफ्नो मिटिङ वा कुराकानीका लागि अनलाइन कन्फ्रेन्सिङ प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित एप्स वा प्लेटफर्मका शर्तहरु राम्ररी हेर्नुपर्छ।
मिटिङका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नम्बरहरुमा डायल गर्दा वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकको ग्राहक सेवा केन्द्रका अन्तर्राष्ट्रिय नम्बरहरुमा डायल गर्दा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको भ्वाइस कलको शुल्क वा अन्य शुल्क लाग्न सक्छ।
हालै भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (ट्राई) ले पनि अप्रत्यासितरुपमा ग्राहकको भ्वाइस सेवाको बिल उठ्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै अनलाइन मिटिङ प्लेटफर्महरु प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएको थियो।
उसकाअनुसार यस्ता प्लेटफर्महरुमा ग्राहकले जानि नजानी अन्तर्राष्ट्रिय नम्बरहरुमा कल गर्दा भ्वाइस कलको शुल्क लागेको गुनासोहरु ग्राहकहरुले राखेका छन्।
नेपालमा पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि यस्ता अनलाइन मिटिङ प्लेटफर्महरुको प्रयोग बढिरहेको हालको अवस्थामा मोबाइलका ग्राहक तथा प्रयोगकर्ताहरुले आफुले प्रयोग गरेको त्यस्ता प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित नम्बरहरु तथा हेल्पलाइनमा कल गर्दा के कस्तो शुल्क लाग्छ भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
अन्यथा प्रिपेड ग्राहकका हकमा मोबाइलबाट ठूलो ब्यालेन्स घट्न सक्ने र पोष्टपेडका हकमा बढी बिल आउनसक्ने जोखिम रहन्छ। जसले गर्दा प्रयोगकर्ताले थाहा नपाएर नै मोबाइलको ब्यालेन्स काटिनसक्नेछ ।
टेलिकम कम्पनी एनसेलले पनि अहिले बढिरेहको अनलाइन मिटिङ् गर्ने प्रचलनका बेलामा आफ्ना ग्राहकहरुलाई सजग रहन भनेको छ।
कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई आफ्नो फेसबुक पेजबाट यस सम्बन्धमा सजग रहन जानकारी दिदै यस्ता प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा शर्तहरु राम्ररी हेर्न सुझाएको छ।
‘सामान्य प्रयोगमा निःशुल्क हुने यस्ता कतिपय एप्स तथा प्लेटफर्महरु प्रयोग गर्ने क्रममा प्रिमियम र अन्तर्राष्ट्रिय नम्बरहरुमा डायल गर्दा भ्वाइस कलको शुल्क वा अन्य शुल्कहरु लाग्न सक्छ। कृपया सो एप्स तथा प्लेटफर्महरुको शर्तहरु हेरेर सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोला,’ कम्पनीले भनेको छ ।
एनसेल मात्र नभई अन्य कम्पनीहरुको सेवामा पनि त्यस्तै हुनसक्नेछ ।
यस्ता अनलाइन मिटिङ प्लेटफर्म तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको सम्बन्धित कार्यालय र ग्राहक सेवा केन्द्रहरु विदेशमा नै रहने हुनाले उनीहरुको नम्बर प्रिमियम वा अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छन्।
पक्कै पनि त्यस्ता नम्बरहरुमा जानकारीका लागि जानी वा नजानी कल गर्दा प्रिमियम नम्बरमा कल गर्दा लाग्ने उच्च शुल्क वा अन्तर्राष्ट्रिय कलको शुल्क लाग्न सक्दछ।
त्यसैले त्यस्ता नम्बरहरुमा कल गर्दै नगर्नुस वा गर्ने नै हो भने सो नम्बर भएको देशमा कल गर्दा लाग्ने शुल्कको बारेमा हेरेर मात्र कल गरेमा ठगिएको गुनासो हुनेछैन् ।
नत्र नि:शुल्क भनिएका अनलाइन मिटिङ प्लेटफर्म र कन्फरेन्स कलहरुबाट तपाईँले रकम गुमाउनुपर्ने हुनसक्दछ ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार
ह्वाट्सएप वेबमा च्याट नखोलिकन नै सन्देश पढ्नुहोस्, यस्तो छ सजिलो तरीका